Ukuhlela isikhathi sokufunda | Ukwakheka nezifundo
Ukuhlela isikhathi sokufunda
UMaite Nicuesa | | Ukuphikisana, Izindlela zokufunda
Ukuhlela isikhathi sokutadisha kwenza ukufunda kube lula. Ukufunda ngendlela ekhiqizayo kuzohlala kuyisiqinisekiso sempumelelo ekufezeni izinhloso kunoma yisiphi isimo semfundo. Lokhu kuhlelwa nakho kubalulekile ngesikhathi sokuphikisana.
Ngakho-ke uma ufuna ukufunda ukuhlela izifundo zakho ngendlela engcono kakhulu, khona-ke sizochaza ukuthi ungakuthola kanjani.
1 Iyini inhlangano ocwaningweni?
2 Ungasihlela kanjani isikhathi sokufunda nokusebenza?
2.1 Ungasihlela kanjani isikhathi sokufunda eyunivesithi?
3 Sihlelwa kanjani isikhathi?
Iyini inhlangano ocwaningweni?
Umkhuba owenziwa umfundi ngale ndlela yokuziphatha esebenzayo. Umfundi ufeza izinhloso ezahlukahlukene zemfundo esifundweni ngasinye. Yebo, kufanele uzilungiselele ukufeza inhloso ngayinye. Futhi leli khono lenhlangano linikeza indlela ebonakalayo yokuqhubekisela phambili inqubo phambili. Isitshudeni sakha uhlelo lokwenza olubonisa isibikezelo semisebenzi ehlelwe ngokuphelele ekhalendeni.
Isenzo ngasinye sikhiqiza umphumela endaweni yezifundo. Lapho ukuhlela kuhlanganiswe nenqubo yomfundi, imiphumela iba ngcono. Ngokuphambene nalokho, lapho ukuphuculwa kaningi kule nqubo, ubungozi bokuthi umfundi afike ezinsukwini ngaphambi kokuhlolwa kungakabuyekezi okuqukethwe kuyakhula.
Ungasihlela kanjani isikhathi sokufunda nokusebenza?
Ukuphathwa kwesikhathi kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe lapho umuntu efunda futhi esebenza. Kodwa-ke, isibonelo salabo abake baphila kulokhu okuhlangenwe nakho kukhombisa ukuthi into ebaluleke kakhulu hhayi amahora uqobo, kodwa ukuwasebenzisa ngempumelelo. Ungasihlela kanjani isikhathi sokufunda uma usebenza?
Bheka ukuhambisana phakathi kwazo zombili izindiza zempilo yakho. Umsebenzi wangempelasonto, owuthola ngebhange lomsebenzi leyunivesithi, ungagcwaliswa ngokuya emakilasini. Ngokufanayo, uma usebenza isikhathi esigcwele, ungahle ukhethe ukwenza iziqu online ku-isikhungo esikhethekile. Ngakolunye uhlangothi, ukuqeqeshwa okuhlanganisiwe kuyindlela okufanele icatshangelwe.
Hlela ukuhleleka kwezinto eziza kuqala. Isikhathi sinqunyelwe futhi, kulesi sigaba, ukusebenza nokutadisha kunendawo ebalulekile empilweni yakho. Udinga futhi ukuphumula futhi ujabulele isikhathi sakho samahhala. Kodwa-ke, ngokumisa ukuhleleka okungokoqobo kwezinto eziza kuqala, ungafinyelela esiphethweni sokuthi manje kufanele ubeke ingxenye ethile ngemuva ukuze ugxile kakhulu ezifundweni zakho.
Buza abanye ofunda nabo ukuthola amanothi uma ungakwazi ukuya ekilasini. Lokhu kuyinto eyenzeka kwesinye isikhathi lapho umuntu esebenza futhi efunda ngasikhathi sinye.
Zibekele imigomo efinyelelekayo ehambisana nezimo zakho. Ungadinga isikhathi esithe xaxa sokuphasa izifundo zasekolishi. Okubalulekile ukuqhubekela phambili: hlala ugxile ezinhlosweni zakho bese ubhalisa ezifundweni ezimbalwa uma kudingeka.
Nciphisa isikhathi osichitha ku-TV, iselula noma ubuchwepheshe. Imizuzu oyitholayo ungayitshala ekufundeni noma kwezinye izindaba.
Hlela isikhala sakho sokufunda. Hlobisa indawo enetafula edeskini elisegumbini elikhanyiswe kahle. Faka ifenisha yesitoreji ukuhlela izincwadi, amanothi nakho konke okokusebenza. Ukuhlelwa kwesikhathi kubonakalisa ukuhleleka. Yebo, leli oda lithola ifomu elibonakalayo ngokuhlobisa indawo ethokomele kakhulu.
Ungasihlela kanjani isikhathi sokufunda eyunivesithi?
Okulandelayo, ku-Training and Studies sikunikeza amathiphu ayisithupha angasebenza njengesiqondisi:
Ukuhlelwa kwesheduli yokufunda. Zama ukugcina ukungaguquguquki kwabakhona ekilasini. Kepha, ngaphezu kwalokho, yenza ikhalenda nesikhathi esidingekayo sokubuyekeza isifundo ngasinye. Chitha amahora amaningi ezihlokweni eziyinkimbinkimbi kakhulu kuwe.
Amasu okufunda, ukuhlela nokusabalalisa isikhathi. Isibonelo, sebenzisa i-ajenda ukubhala imininingwane efanelekile kusuka enkambisweni yakho yokufunda. Ngendlela efanayo, sebenzisa amasu wokutadisha ukuze ufunde kalula okuqukethwe: umugqa, umugqa, isifinyezo, ifayili le- imithetho yokubamba ngekhanda, amabalazwe womqondo nama-flashcards angamathuluzi asebenzayo.
Izinhloso zamasonto onke. Elinye lamaphutha ajwayelekile ukuhlehlisela esinye isikhathi udaba olungathathwa njengoluphuthumayo esikhathini esifushane. Kodwa-ke, kunesisekelo esiyisisekelo maqondana nalesi sihloko: inhlangano enhle kakhulu iqala ngokuhlangabezana nezinhloso zamasonto onke.
Izinga lobunzima lokuqukethwe. Kunezindlela ezahlukahlukene ongazisebenzisa ukuklama isu elizokusiza ukuthi ugxile kangcono. Isibonelo, kungenzeka ukuqala usuku ngokufunda isifundo esinzima kakhulu bese uqhubeka nesilula. Kepha kungenzeka ukusungula umbandela ophambene. Okubaluleke kakhulu ukuthi ulandele iskripthi esikusiza ukuthi ugxile kangcono.
Gwema iziphazamiso. Isibonelo, uma uya emtatsheni wezincwadi ukuyofunda, zama ukukhetha isihlalo endaweni lapho kudlula khona abantu abambalwa. Ngendlela efanayo, hlala edeskini lokho okudingayo ngaleso sikhathi. Vala iselula bese ugxila entweni oyifundayo.
Yenza lokho obukuhlelile ku-ajenda yakho. Ukuhlela kuhlala ngaphakathi kohlaka lwethiyori uma ungakusebenzisi kamuva. Zikhuthaze ngemiklomelo emincane phakathi nesonto. Thola ukuthi yiziphi izikhathi zakho ozithandayo zosuku. Bona ngeso lengqondo leso sikhathi senjabulo njengomklomelo ozophila ngawo ngomdlandla owengeziwe uma ngaphambilini wazifeza izinhloso ozibekele zona. Isibonelo, ikhefu elifushane liyisikhuthazo esishukumisayo ngemuva kwesikhathi sokuhlushwa okukhulu.
Sihlelwa kanjani isikhathi?
Isikhathi, uma kukhulunywa ngokuqinile, akuyona impahla ongayifanelekela ukusetshenziswa okuthile. Njengomfundi, awuyazi yonke imininingwane yokuthi kuzokwenzekani ngesonto. Kepha yebo ungenza isibikezelo esilinganiselwe saleso sikhathi sesikhathi ngalokhu kulindela. Lokhu, empeleni, kuyisihluthulelo sokuhlela. Ngale ndlela, wenza lokho okuhlelile kwenzeke. Ukuze iphrojekthi ikwazi ukusebenza kudingekile ukuthi uzibophezele manje ekugcwalisekeni kwayo. Lokho wukuthi, ukuthuthukiswa kwalolo hlelo kuxhomeke kuwe kuphela.
Ukulawulwa kwesikhathi sokufunda kubalulekile ukuthuthukisa inhlangano. Kunconywa futhi ukuthi ulandelele impumelelo. Ngale ndlela, awugcini nje ngokubeka ukuziphendukela kwakho ekubonakaleni kuyo yonke inkambo, kepha futhi uvusa ugqozi lwakho lokuqhubeka uthuthuke kule ndlela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Izindlela zokufunda » Ukuhlela isikhathi sokufunda
Amakhono okuqonda kanye nenqubo yokufunda